Xylometazoline Cas 526-36-3 Qiime, Alaab-qeybiye ka yimid Bolise
[CAS MAYA. ] 526-36-3
[Foomka Molecular] C16H24N2
[Miisaanka Molecular] 244.382
Ku saabsan Xylometazoline
Xylometazoline waa walax kiimiko ah. Dhibcaha sanka ee laga sameeyo Xylometazoline waa daawooyin adrenergic ah waxayna leeyihiin saameyn xamaasadeysan oo gaar ah oo ku saabsan recep adrenergic receptors. Waxaa loo adeegsadaa amines sympathomimetic iyo soo dhaweynta alfa ee marinnada dhiigga ee yar yar ee xabka sanka si ay u soo saaraan vasoconstriction, taas oo yareyneysa socodka dhiigga si loo yareeyo ciriiriga iyo bararka xabka sanka. Waa wax ku habboon muddada dheer ee waxqabadka sanka.